Misy faritra 3 tsy ampoizina mampientana ny lehilahy !
Amin’ny ankapobeny, ny faritry ny taovam-pananahan’ny lehilahy avy hatrany no kitihantsika vehivavy, rehefa te hanaitra ny lehilahy.
Tsara tadidiana anefa fa ny vatana iray manontolo dia mety ho loharanom-pahafinaretana avokoa. Misy faritra 3 amin’ny vatan’ny lehilahy ireto, tsara omena lanja manokana amin’ny alalan’ny kitika sy ny safosafo, satria dia hampientana azy tokoa.
Eo amin’ny vehivavy dia efa iaraha-mahalala fa mitondra fahafinaretana be ny fikitihana ny faritry ny nono, indrindra ny loha-nono. Fa misy koa ny lehilahy tena mankafy an’io kitika iray io. Lelafina, tsentsafina, somary kaikerina moramora… Ho hitanao fa hihenjana ny loha-nonony, marika fa ankafiziny ny ataonao. Azo asiana vaingana lagilasy kely koa ao anaty vava, ka sady mitsentsitra izany ianao no manoroka ny loha-nonony… Ho hafa mihitsy ny fahafinaretana tsapany.
Mampieritreritra ny taovam-pananahan’ny lehilahy ny ankihiben-tanana. Iaraha-miaiky izany ! Fa tsy eritreritra fotsiny anefa izany, satria rehefa mikitika an’io rantsan-tanany io ny vehivavy, dia tsapan’ny lehilahy any amin’ny filahiany izay rehetra atao aminy. Atao toy ny hoe : ilay taovam-pananahany mihitsy no omena fahafinaretana, mandritra ny savaranonando, dia hientana aoka izany izy. Raha mandritra ny firaisasana ara-nofo moa no hikarakarana ilay ankihiben-tanany, dia vao mainka ho avo roa heny ny fahafinaretana ho tsapany. Andramo ange ny sady milelaka ny ankihibeny no mijery azy ao anaty maso e !
Araka ny fantatra dia mora tohina kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy, raha ny faladia no kitihina. Mampiakatra ny filàny mihitsy, rehefa hay ny mikitika an’io faritra io. Tsy kitihina amin’ilay atao manitikitika hampihomehy azy akory, fa somary potsipotserina. Amin’ilay hariva avy miasa iny, esory ny kirarony, anomano rano mafana izy handomany ny tongony. Rehefa avy eo dia potsipotsero moramora ao anaty rano mafana ao ny faladiany, indrindra ny eo ambanimbanin’ny ankihiben-tongony ao…